Iflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala epheleleyo - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala epheleleyo
Wamkelekile kwiGorgeous Goa! Eli inokuba likhaya lakho kude nekhaya elinazo zonke izixhobo zangoku ezikhoyo kuwe kubandakanya i-Broadband High speed Wi-Fi simahla. Ilungele abantu abahamba bodwa, izibini ezifuna ixesha elisondeleleneyo nelizolileyo kunye nolonwabo olukhulu kwiintsapho ezinabantwana. Imbonakalo yomhlaba, iqula lokuqubha, kunye nokuba kufutshane namalwandle kwenza ukuba ilungele naliphi na iholide!
Sineeyunithi ezimbini kwi-Riviera sapphire complex. Siyakwamkela ukuba uhlale kweli gumbi lihle litofotofo elinezixhobo zala maxesha, ikhitshi elisebenza ngokupheleleyo elinefriji, umphezulu wokupheka, imicrowave, kunye namanzi acocekileyo ahluziweyo. Kukho ibhedi enhle ye-plush memory foam, enebhedi epholileyo, indawo yokutyela, i-cable TV kunye ne-backup yamandla - i-inverter inikwe kwakhona.
4.65 · Izimvo eziyi-117
I-Siolim yidolophu ezolileyo, ezolileyo, eluhlaza kakhulu, entle ebekwe kuMntla weGoa, yimizuzu eli-15 kuphela kude nolwandle oluzolileyo olunje ngeAshwem naseMorjim. Imalunga nomgama ofanayo ukusuka kwindawo yaseBaga naseCalangute. Imarike enkulu ikwimizuzu emi-5 kude, kukho iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela ezikufutshane.
Umnakekeli wam uya kulawula yonke inkqubo yakho yokungena kunye nokuphuma kwaye nditsalelwe umnxeba nje. Nditsalele nantoni na oyifunayo, ubukhulu becala ndihlala eGoa. Ukuzihlola ngokwakho kwaye ujonge ngaphandle kunye nokucocwa rhoqo kwendlu ngesicelo
Umnakekeli wam uya kulawula yonke inkqubo yakho yokungena kunye nokuphuma kwaye nditsalelwe umnxeba nje. Nditsalele nantoni na oyifunayo, ubukhulu becala ndihlala eGoa. Ukuzihlola…